आकाशे पुल सेल्फीकै लागि ! - Naya Patrika
आकाशे पुल सेल्फीकै लागि !
नयाँ पत्रिका, झापा | असोज २६, २०७४
दमकमा आकाशेपुल बन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृहनगरमा ‘अब झापाको विकासले गतिलै फड्को मार्ने भो’ भनेर टिप्पणी गर्नेको कमी थिएन । ०७३ पुसमा यो आकाशेपुलको उद्घाटन पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नै गरे । तर, पुलको सदुपयोग भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
राजधानीबाहिर पहिलोपटक सञ्चालनमा आएको दाबी गरिएको यो आकाशेपुल यतिवेला ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तो भएको छ । पैदलयात्रुहरू बाटो पार गर्नका लागि यो पुल प्रयोग गर्दैनन् । प्रयोग गर्छन् त मात्र सेल्फी खिच्नका लागि । पैदलयात्रुले परबाटै आकाशेपुल देख्छन् । हतार गर्दै पुलमाथि चढ्छन् । र, धमाधम सेल्फी लिएर ओर्लिन्छन् ।
सेल्फी खिच्नका लागि हातमा लामा–लामा ‘सेल्फी स्टिक’ बोकेका युवापुस्ता प्रसस्तै भेटिन्छन्, पुलमाथि । पुलको तलबाट जोखिम मोलेरै बाटो काट्नेको भने कमी छैन । त्यसैले झट्ट हेर्दा आकाशेपुल सेल्फी खिच्नकै लागि बनाइएको भान हुन्छ ।
दसैँको टीकाका दिन १० मिनेटमै झन्डै सय सर्वसाधारणले यो आकाशेपुललाई सेल्फी लिने थलो बनाए । पुलमाथि चढेर विशेषगरी युवतीहरूले फोटो खिच्ने गरेका छन् । उनीहरू समूह नै बनाएर फोटो खिच्न पुलसम्म पुग्छन् । आकाशेपुलबाट बाटो काट्नेलाई समेत फोटो खिच्नेहरूको भिडले अल्झाउने गरेको छ ।
आकाशेपुल सञ्चालनमा आएपछि दमकको ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, सरोेकारवालाले पुलको उपयोगिताबारे सर्वसाधारणलाई अझै बुझाउन नसकेको दमकवासी बताउँछन् ।
सडक पार गर्नका लागि बनाइएको यो पुललाई शिक्षित वर्गले नै उपहास गरिरहेका छन् । पुलमा उक्लिन र ओर्लिन झन्जट लाग्ने हुँदा आफूले पुलको मुनिबाटै सडक पार गर्दै आएको पैदलयात्रु विवेक खनालले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषको ७३ लाख २ हजार ५ सय ६३ र दमक नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ४० लाख ४८ हजार ८ सय ६३ रुपैयाँ गरी १ करोड १४ लाख ४१ हजार ८ सय ६३ रुपैयाँ लागतमा यो आकाशेपुल निर्माण भएको हो । २५ मिटर लम्बाइ २ दशमलव ५ मिटर चौडाइ र ६ दशमलव ३० मिटर उचाइको यो पुलको निर्माण प्रवीण निर्माण सेवाले गरेको हो ।
आकाशेपुल प्रयोगविहीन भएको दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीलाई पनि थाहा छ । मेयर ओलीले आकाशेपुलको प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा चाँडै ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गरिने बताए ।
‘दमकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि बालबच्चा र बुढापाकालाई सडक पार गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर आकाशेपुल बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘तर, मान्छेमा जनचेतना कमी रहेको पाइयो । पुलबाट जानुस् न भन्छौँ, तर उनीहरू पुल निकै पर छ भन्दै सीधै बाटो काट्छन् ।’